Hab Fikirka Toolmoon | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdiqani Qorane Cismaan — February 1, 2020
Sida aad u fikirto ayay noloshaada u ekaanaysaa.
Fikirku waa faldhaca qofka iyo maskaxdiisa dhexdeeda ka dhaca, waa sababta keenta inuu qofku mashquulo oo fikiro, isaga oo fooganaan iyo falanqayn ku sameeya hadba waxa maankiisa ka dhex guuxaya, isaga oo ilaaba amba aan ka war qabin si wacan, waxyaabaha ka ag dhacaya ama ka ag socda.
Inkasta oo ay fikraduhu kala duwan yihiin oo uu noqon karo mid togan ama taban. Laakiin waxa is weydiin mudan maxaa laga fikirayaa?
Haddana diinteennu waxa ay dhiirigalisey hab fikirka Toolmoon, Qur’aankana inbadan ayaad ku arkeysaa iyadoo ilaahay ina leeyey “Miyaaney Fikireyn” “Miyaaney Caqli lahayn”.
Waxaa laga fikirayaa waxyaabo kala duwan oo ninba meel iyo hadaf ayaa u cad. tusaale: waxaan ka fikirayaa sidaan nolosha wax cusub ugu soo kordhin lahaa ee aanan culays ugu noqon lahayn, sidaad nolosha u badali lahayd, sidaad qayrkaa u dhaafi lahayd, iyo sidaad aqoonyahan la mahdiyo u noqon lahayd laguna diirsado wanaaggiisa.
Si aad u cabbirto dareenkaaga ku aaddan mustaqbalkaaga iyo waxaad tiigsanayso, si aad xogagaal nololeed u noqon lahyd. Waligaa hankaaga iyo himiladaada dheeree, hiiigso meel saraysa oo hadafkaaga gaar yeel, noolee hankaaga oo rajadaada hawl gali, waligaana habsamida iyo hubsiimada ku dadaal. Wax ku hiifa waad heli oo neceb horumarkaaga, balse dhag ha u dhigin. Waxaad hayb ka dhigataa halkad gaadh isleedahay, hiil waxaa ka dayataa ciddi aad la heer tahay, waligaa naftaadana ku hogaami diintoo ha ilaawin islaamnimo.
Mar kasta oo uu hab fikirkaagu kobco waxay baahi dheeraad ahi kuu qabataa inaad isbadal togan samayso, waxyaabaha fikirka kobciyana waxa la yidhaahdaa waxa kamid ah wax Akhriska.
“Ninka ugu il dheerbaa
Isaguun u muuqda”.
Waxkasta oo dunida kor saqran baahi iyo u jeeddo kala duwan ayaa keenta, sida cuno inaad u baahato gaajo ayaa keenta, in wax la cabo haraad ayaa keena, in la nasto daal ayaa keena. Haddaba maaxaan odhan karnaa fikirka ayaa keena? Jawaabtu waxaan ku daboolayaa xikmad shiinays ah oo tidhaa:
“dhibtu waa furaha fikirka……fikirku waa furaha aqoonta…….aqoontu waa furaha guusha…….guushana waa furaha badhaadhaha”.
Haddaba waxaa is weydiin leh halkeen ka bilaaba fikirka?
Ka bilow waxaad rabto ugana fikir si qoto dheer, adiga oo raba inaad ka dhaganaato fikiradaha dadka kale, kana dawow cudurka fikir la’aanta, sidee? Yacni dadka ma kala jecla hore u socod iyo dib u socod midna balse adigu noqo qof jecel, raba, hiigsanaya, tabaya inuu hore u socdo noloshiisa oo dhan. Fikir la’aantu waa ka kaliya ee sababa abaarta, baa’ba, iyo inay raadiso markasta waxaan iyada ka iman amna ka soo bixin.
TIXRAAC: Hoggaami Naftaada/ Xamse Samotalis.
Tags: Hab Fikirka Toolmoon
Next post Quruxda Jawaab Celinta
Previous post Saamaynta Fıkradaha Dadka Kale, Waligaa Ha Isdhiibin!